Macluumaad Macluumaad Leh Sabab Kasta Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Diirada Saarto Mobilka | Martech Zone
Waxaan ku qaadannay qaybo dhowr ah Edge-ka Webka Raadiyaha ugudbinta dhagaystayaasheena ahmiyada mobilka. Waxaan badanaaba kahadalnaa dhanka suuq geynta moobiilka laakiin sidii aan fadhiyay saldhigga oo aan ugala hadlayo showga Erin Sparks ee Istaraatiijiyadda Goobta, Runtii waxay igu bilaabatay inay ii soo ifbaxdo sida habdhaqanka moobiilku u isbedelayo ee ku saleysan noloshayda.
Caawa waxaan qoray saaxiibkeyga wanaagsan oo ka cabanaya in e-maylkiisa uusan aheyn taleefanka gacanta iyo in aanan ka akhrisan karin taleefankayga. Haddii e-maylkaagu aanu fiicnayn, qofna ma cabanayaa? Mise way iska indha tirayaan ama xitaa iska joojinayaan?
Dhowr toddobaad ka hor annaga podcast, Waxaan taxay in kabadan darsin dabeecado kaladuwan oo aan ku sameyn jirnay banaanka aaladaha moobilkeena laakiin dhamaantood u haajiray calaacasha gacanta. Wicitaanada taleefanka, fariimaha qoraalka ah, kamarada, digniinta, digniinta jadwalka, ganacsiga, khariidaynta, muusiga, fiidiyaha, bangiyada, ciyaaraha, bulshada, raadinta caafimaadka, tigidhada, lacag bixinta, qaansheegadka, cilmi baarista, emaylka, duubista fiidiyaha…
Erin ayaa iiga faallooday sida weyn ee liiska u ahaa. Waxaan ula imid anigoo falanqeynaya waxqabadkeyga maalintii oo dhan. Liistadaasina way sii kordheysaa iyadoo codsiyada moobiilka iyo daruurtu ay sii wadaan inay ii adeegaan wax kasta oo aan u baahanahay. Qalabkeyga gacanta ayaa muhiim u ah guusha ganacsigeyga, si aan ula xiriiro qoyskeyga, iyo inaan maareeyo shaqadeyda maalinlaha ah iyo nolosha guriga. Si daacad ah uma hubo waxa aan sameyn lahaa la'aanteed aaladda moobaylka! Waan ka gariirayaa xitaa inaan ka fikiro!
Aniga kaligay ma ihi - waxaad moodaa in aduunka oo dhami uu baxay mobaylku ganacsataduna waxay u baahan yihiin inay aqoonsadaan in macaamiishooda ay horeba u joogeen… xitaa haddii ganacsigoodu aanu ahayn!
Tags: taleefanka gacantaDK New Mediageeska raadiyaha webkablog tiknoolajiyadda suuqgeyntaMMSqalabka digniintaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkabangiyada gacantadigniinta kalandarka mobiladakaamirada gacantaganacsiga gacantadhaqanka macaamiisha guurguuradhaqanka macaamiisha wareegaemaylka gacantaCiyaaraha mobiladaraadinta caafimaadka wareegataleefanka gacantaqaansheegadka wareegakhariidaynta moobiilkamarketing mobilemuusikada gacantalacag bixinta mobiladabaaritaanka mobiladamobile wareegafarriinta qoraalka moobiilkatigidhada moobiilkafiidiyaha gacantaduubista fiidiyowga moobiilkawicitaanada telefoonkaistaraatiijiyada goobtaSMSfariin qoraal ah
Sweetspot: A Mobile First, Workflow-Powered Dashboard Dijital ah